Chọpụta mara mma Shetland Islands na Scotland | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Ido Scotland, General
na Agwaetiti Shetland bụ ebe nrọ, isi ihe na-enweghị uka njem, mana nke ahụ na-enye anyị ọdịdị ala nke siri ike ichefu. Agwaetiti ndị a dị na North Atlantic, bụrụ akụkụ nke Scotland. Ihu igwe ya na-adi mmiri ma na-ajụ oyi n'oge ọkọchị ma na-ajụ oyi ma na-efekwa na nnukwu mmiri ozuzo n'oge oyi, nke na-anaghị ewepụ amara ya, ebe ọ bụ na ọ bụrụ na anyị agaa n'àgwàetiti ndị a, anyị nwere olileanya ịhụ ihe dị ka ọdịdị ha.
Anyị ga ahụ Kedu ihe anyị nwere ike ịchọta na Shetland Islands, paradise paradaịs ebe anyị nwere ike ịmatakwu mgbọrọgwụ Viking nke akụkọ ntolite ya. Ọ bụ ebe ugwu na UK na nso Norway na Faroe Islands. E nwere ihe karịrị otu narị agwaetiti na Shetland ma ọ bụ naanị iri na ise ka mmadụ bi. Ma ka anyị matakwuo banyere ebe a na-adọrọ mmasị.
1 Ihe ịmara gbasara agwaetiti Shetland
4 Ememme Viking
Ihe ịmara gbasara agwaetiti Shetland
Agwaetiti ndị a nwere ọtụtụ agwaetiti nta, mana dịka anyị kwuru, sọọsọ mmadụ iri na ise n’ime ha bi. Nke kasị n'ọnụ ọgụgụ bụ Mainland, ebe isi obodo ya, Shetland. Agwaetiti ndị a nwere ihu igwe oyi na ikuku, oyi na mmiri ozuzo n'oge ọkọchị, yabụ na anyị agaghị ahụ okpomọkụ, mana eziokwu bụ na ọ bụghị ezigbo oyi n'ihi Ọdọ Mmiri. Ma a na-atụ aro ka ịgakwuru ha na uwe na-ekpo ọkụ na ọkachasị uwe na-echebe site na oyi na ifufe. Oge kachasị mma bụ ịrụ ụka adịghị ya na oge ọkọchị, mgbe okpomọkụ na-adịkarị ala. Ma n’oge oyi, ọ bụ ezie na ha nwere awa ole na ole n’ehihie, e nwere ebe ndị ọzọ, dị ka ememme Viking a na-eme na Jenụwarị na Febụwarị.
Jarlshof bụ otu n'ime saịtị ndị prehistoric kasị mara amara ma dị mkpa na agwaetiti. Ndị bi na saịtị a kemgbe 2.500 BC na ndị bi na ya ruo narị afọ nke XNUMX. Ọ dị ịtụnanya na ebe a anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ ụlọ site na Bronze Age nke nwere mgbidi zuru oke echekwara. N'otu aka ahụ, anyị nwere ike ịgagharị n'okporo ụzọ nke Iron Age wee nwee ọ enjoyụ na foduru nke mmepeanya Viking. Anyị nwekwara ike ịhụ ụlọ ewusiri ike ochie a maara dịka Houselọ Ochie nke Sumburgh.
Nke a bụ isi obodo nke Shetland Islands na otu n'ime ebe a ga-ahụrịrị na agwaetiti ndị ahụ. Amụrụ isi obodo a n'akụkụ ọdụ ụgbọ mmiri, nke bụ ebe azụmahịa dị oke mkpa maka ndị ọkụ azụ azụ azụ azụ Dutch. Okporo ámá ya bụ Okporo mercialzọ Azụmaahịa, ebe ị nwere ike ịhụ ụlọ ahịa nke ngwaahịa ọdịnala. Nwere ike ghara uche Fort Charlotte, a narị afọ nke XNUMX ebe e wusiri ike na ị kwesịrị ị na-ahụ lodberries, nke bụ ụlọ na oké osimiri. Ihe niile nwere ihe pụrụ iche na amara pụrụ iche nke na-agaghị ahapụ gị enweghị mmasị. Na mgbakwunye, ị nwere ike ịchọta Shetland Museum iji mụtakwuo banyere akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị nke agwaetiti.
Ọ bụrụ na ị bụ onye nwere mmasị na omenaala Viking, ị ga-aga n’ọnwa Jenụwarị, ọkachasị na Tuesday ikpeazụ nke ọnwa a, nke bụ mgbe ndị mmadụ maara nke ọma. Ememe Viking Up Helly Aa, ememme a na-eme kemgbe ihe karịrị otu narị afọ. Ememme ahụ na-ewe ụbọchị dum ma na-aga n'ihu n'abalị. Parades, ngagharị na abụ na-esochi, ebe onye ọ bụla nwere uwe ejiji Viking. Ọ bụ ememme a na-efe ọkụ ọkụ, anyị nwere ike ịhụ ogologo Viking wee gaa n'ihu na mmemme ahụ ruo ụtụtụ. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ ahụmịhe pụrụ iche anyị kwesịrị ịnụ ụtọ ya.
Este obodo bụbu isi obodo Shetland ma taa, ọ ka bụ ebe a na-enwe mmasị n'agwaetiti ndị ahụ n'ihi ya, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịhapụ otu ụbọchị iji leta ya. Ihe kachasị mkpa n'obodo a bụ nnukwu ụlọ ya, nke Duke nke Orkney wuru na narị afọ nke XNUMX. Right n'akụkụ a nnukwu ụlọ bụ Scalloway ngosi nka. Ikwesighi ile anya ịhụ ọdụ ụgbọ mmiri ya mara mma, ebe ị nwere ike ịhụ obere ncheta raara nye Shetland Bus, ụgbọ njem nke jikọtara agwaetiti ndị ahụ na akụkụ nke Norway ndị Nazi biri.
Ọ bụrụ na anyị echepụtawo Jarlshof ihe ochie anyị nwekwara ike ịga leta ụlọ ọkụ a. Ọ dị na Reserve ọdịdị nke Cape Sumburgh n'akụkụ ndịda nke agwaetiti Mainland. E wuru ụlọ mposi na narị afọ nke XNUMX na gburugburu anyị nwere ike ịhụ ọnụ ugwu dị egwu na oke osimiri na-agbagha megide ha, ihe osise a ga-enwerịrị na agwaetiti ndị a. Na nleta a anyị ga-enwe ike ịbanye na laithaus, nke enwere ebe ntụgharị. Mpaghara a dị mkpa n'ihi na ọ nwere otu n'ime ógbè nnụnnụ nwere ike ịnweta ma nwee ike ịhụ dolphins, whale na-egbu egbu na whale ka ọ wee nwee ahụmịhe ọzọ pụrụ iche nke agwaetiti.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Shetland
Gaa na Cook Islands